बजेटको तयारीमा गण्डकी प्रदेश, कतिको बजेट आउला ? | NepalDut
बजेटको तयारीमा गण्डकी प्रदेश, कतिको बजेट आउला ?
गण्डकी प्रदेशको आ.व. २०७६/०७७ को बजेट करिब ३४ अर्बको हुने भएको छ । यो बजेट १० अर्बले बढी हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवमा २४ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै आगामी वर्षको बजेट पनि प्रक्षेपण गरिएको थियो । खर्च संरचनाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३४ अर्ब १९ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने छ ।
मन्त्री गुरुङले सरकार प्रिबजेट तयारीमा रहेकाले मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा गरिएको प्रक्षेपण अनुसार कै बजेट आउने बताए ।
संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमानित विवरण संघले पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँडतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा सरकारले आव २०७६–२०७७ मा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा कुल बजेटमध्ये चालु खर्च ८ अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ७६ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले बाँकी १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउनेछ ।
बजेटको स्रोत भने २१ अर्ब १२ करोड संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँड ८ अर्ब १५ करोड, आन्तरिक राजस्व २ अर्ब ३२ करोड, वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ ।